Uri zvakaoma chinoumba 'mitambo mupengo' uyo nguva dzose achida kuisa neapo 'Bheji', asi zvimwe akawanikwa pachako aizengurira vose hurukuro pamusoro kusakundika, pfungwa Anopararira, Bookies uye sportsbooks kuenda nenzira pamusoro musoro wako?
kana hongu, ipapo faranuka. Tine chete zvinodiwa kukupa nyanzvi vachitamba nzira uye kuwana iwe kuita-vakagadzirira hakuna nguva zvachose.
tsime, Ndiri guessing aunotoziva yawo mukombe nyika nguva uye ndawana nzira yako yakanaka shoma kona kuona mutambo. saka, gara shure, vanobata chokunwa uye kuverenga pamusoro.
Kutyora zvinhu pasi uye kunzwisisa Zvidobi nane, ngatitarise mamwe anowanzoshandiswa vachitamba mazwi, akadai 'mari rwokuyeresa', 'Akaremara' uye 'pfungwa Anopararira'.
A mari mutsetse munhu vachitamba mutsetse chinotsanangura mari imwe mutambi anofanira bheji pamusoro, kuti uzo kuhwina ane mari itii $100. Kuhwina mari mutsetse bheji, chikwata chiri Bet pamusoro kungoti ane kuhwina mutambo. Mibayiro Makavakwa kumativi vasingabvumirani vechokwadi pane zvatinosiita pazvinhu kusakundika. zvisinei, uwandu kuti mutambi kunoita akasiyana kuti kubva mutambo kuti mutambo, inobva sezvisingaiti vanomutswa.
Ngatimboonai muenzaniso kunzwisisa zvinhu zviri nani. Chimbofunga tsvagai nhabvu mutambo apo zvikwata zviviri – yangu pachangu favorite kuva vaparidzi vasina hanya vanobva uye Packers, vari kutamba imwe muna NFL Championship.
Onai zvinotaurwa sezvisingaiti Dzakafanana panguva:
vaparidzi vasina hanya vanobva: +140
Football Betting Strategy Blog Will Mberi Mushure bhonasi Table pazasi
saka, panguva iyi chaizvo chiitiko; ari Packers rinoyerera favorite – sezvinoratidzwa kubvisa chiratidzo prefixing zvavari shamisa kuti 130, ukuwo vaparidzi vasina hanya vanobva vanonzi underdogs – sezvinoratidzwa ndinoiitawo chiratidzo prefixing zvavari shamisa kuti 140.
Saka musi kunyatsoongorora, izvi zvinoreva kuti vatambi vanosarudza Bet pamusoro favorite, muchiitiko ichi, ari Packers, vachava pangozi $130 madhora kuhwina chokwadi mari $100. Pane rimwe divi, vatambi vanosarudza bheji pamusoro underdog kana vaparidzi vasina hanya vanobva vachava ngozi nyaya iyi $100 kuhwina chokwadi mari $140.
Cherechedza kuti, kunyange zvazvo vakawanda mari mitsetse vachitamba nzira vari kunoziviswa vamapoka $100, kuti mutambi akasununguka kurwa mari mudiki pane. The mari mutsetse anoramba kushanda pamwe chete mitsetse sezvo inokurukurwa pamusoro.
The izwi akaremara mu footballbetting munhu nzira kuti kuedza kuumba yakadzikama uye rakaparadza kuridza chikuva pakati zvikwata zviviri zvakasiyana calibres '. In this method, kugadziridzwa chinoitwa kuti aida muchifarira underdogs zvokuti kukuru favorite iri mutambo kuti zvibodzwa dzimwe nhamba nezvinangwa kunyange nezvinhu vorongerwa dzavo. Izvi zvinobatsira zambuko paputsika uye kunyange kunze mikana yokuva weNobel wechokwadi.
The izwi pfungwa Anopararira Rinoreva akaremara kuti anoiswa pamusoro pevane chikwata tichitarisa pfungwa kuti scored pamusoro uye pamusoro yakatarwa nhamba. Ngationei muenzaniso iwoyo apo vaparidzi vasina hanya vanobva vari imbwa pasi uye Packers agoramba favorite.
Kana packers vanoonekwa se favorite kubudikidza 10 pfungwa pamusoro vaparidzi vasina hanya vanobva, pfungwa kupararira yakaiswa sezvo 10. saka, zvino vatambi vachitamba vemuchikwata Packers vachava kukunda Bet kana Packers kuhwina ne 11 anonongedza kana kupfuura, pamusoro zvibodzwa of vaparidzi vasina hanya vanobva. Vaya vachitamba vaparidzi vasina hanya vanobva kungoita kuhwina bheji kana chikwata chavo kana vakakunda mutambo kana anorasikirwa ne 9 pfungwa zvichidzika.
Zvinogona kuzoguma vava tai kana Packers kukunda kubudikidza scoring chaizvo 10 pfungwa. In iyi, sezvisingaiti vari evened panze uye mari vakagoverana.
Football Betting Strategy Blog nokuda Sports.expresscasino.co.uk. Rambai What iwe kuhwina!